Manala ny tavy amin’ny sisin-kibo
Manala kibo amin'ny fomba tsotra
Mila koloina matetika ny kibo mba hanalana ny roroa. Ireto Fampihetseham-batana ireto dia manamafy ny hoza-kibo sady mampifintina azy :
Manatsara endrika ny fitombenana … baolina ampiasaina
Mampandaitra ny fampihetseham-batana hatao ny fanovaovana ny karazany hatao. Raha maniry hikolo ny fitombenana ianao dia azonao hatao tsara koa ireto manaraka ireto :
Manamafy sy mampanifinify ny sandry
Anisan’ny faritra mora miroraka amin’ny vatana ny sandry rehefa mandroso ny taona, raha tsy koloina. Ilaina araka izany ny manamafimafy azy ireo.
Manintsana sady mikolo ny hoza-pe sy ny hoza-kibo
Mikolo ny vatana manontolo ny fampihetseham-batana atolotra anao anio. Raha atao haingakaingana ny fihetsika dia manintsana tavy izy ireo. Manamafy manokana ny hoza-pe sy ny fitombenana koa izy ireo ary miantraika hatrany amin’ny hoza-kibo :
Manala kibo amin'ny patin, ao an-trano
Hafa kely ny fampihetseham-batana atolotra anao anio. Ampiasana ireny patin fanadiovana trano ireny izy ireto ary ny faritry ny kibo no tena miasa sy mahazo aminy.
Mampiakatra nono miroraka amin’ny elastique
Azo atao ny mampiakatra ny nono miroraka fa mila finiavana sy faharetana kosa. Ireto fampihetseham-batana ireto no atao :
Hanampy anao hanala ireo tavy amin’ny andaniny roa amin’ny kibo ny fanaovana ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :
Mijoro mahitsy dia somary asabaka ny tongotra roa. Mitazona zavatra mavesatra amin’ny tanana havia . Raha tsy manana haltère dia atao tavoahangin-drano. Ny tanana havanana kosa atao ao ambadiky ny loha. Alatsaka manaraka ny vatana midina ny tanana havia dia averina amin’ny paozy niaingana. Averina in-20 izay dia avadika amin’ny tanana havanana indray ilay “haltère” na tavoahangin-drano. Manao andiany 4.
Mijoro mahitsy dia mitazona hazo na tahon-kifafa amin’ny tanana roa. Ahodina toy ny hamily fiara ny kifafa, atao miankavia sy miankavanana, in-20. Izay ny andiany 1 dia manao andiany 4 amin’izany.
Mijoro mihorirana raha mihoatra amin’ny rindrina dia mitehina eo ny tanana havanana ohatra. Akarina ny tongotra havanana dia ampidininina. Izay fihetsika izay no averina in-20 dia mivadika amin’ny lafiny ilany indray, izany hoe ny tongotra havia indray no ampiakarina sy hampidinina. Manao andiany 4 amin’izany koa.
Sady ho afaka ny sisi-kibo ao an-damosina eto no hahazo hozatra koa ny fitombenana. Mitazona hazo na tahon-kifafa fa atao ao ambadiky ny hatoka izany. Amin’ny sisin’ny hazo no mitazona ny tanana roa. Miondrika sady atondrotra ny fitombenana dia akarina ny vatana. Izay fihetsika izay no averina in-20. Manao andiany 4 koa.